Okwu iwebata Youtube Community Tab - AudienceGain Ltd.
Okwu mmalite nye Youtube Community Tab
Yabụ ị chere na ị ga-ewulite ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe na YouTube mfe site na ịnweta ọtụtụ ndị debanyere aha?
O di nwute, i mehiere. N'ezie, ọ bụ mmalite nke itinye aka na usoro ndị na-ege gị ntị.
Ihe ọzọ bụ, ibudata ọdịnaya vidiyo mara mma ezughị iji gbaa ndị debanyere aha gị ume ka ha nọrọ na chanel gị.
Ihe ikwesiri ime bu ichota otu ndi mmadu nwere uche ichoro ka ha buru uzo nke YouTube ma soro ha.
Na post a, anyị ga - egosi gị otu ị ga - esi nweta ọtụtụ uru na gị Youtube Community taabụ ma soro ndị na-ege gị ntị na-emekọrịta ihe nke ọma.
Ka anyị malite!
Gịnị bụ YouTube Community taabụ?
Gịnị bụ Youtube Community Tab?
Community dị na ibe ọwa kachasị na ebumnuche bụ ịga n'ihu ịgbasa echiche nke obodo na YouTube, na-enyere gị aka ịbịaru ndị na-ege gị ntị nso.
N'ụzọ bụ isi, taabụ obodo na-agbanwe YouTube na ntanetị zuru oke. Ọ na - ewetara gị ọtụtụ ohere ịgwa ndị debanyere aha gị okwu dị iche iche: vidiyo, ederede, onyonyo, ntuli aka wdg.
Yabụ, ịkwesighi ịhapụ YouTube ma ọ bụrụ na ịchọrọ ederede ederede, ọ bụghị naanị vidiyo.
Ibe enyemaka YouTube banyere Community Tab na-agwa gị na “Ndị okike nwere ihe karịrị ndị debanyere aha 1,000 nwere ohere ịbanye na Community posts. Ọ ga-ewe izu 1 iji hụ ebe taabụ obodo ahụ gafere otu puku ndị debanyere aha. ”
Yabụ ọ bụrụ na inweela ndị debanyere aha 1000, mgbe ahụ na-ekele gị! Ọ bụrụ na ị ka na-arụ ọrụ na 1K izizi gị, adala mbà - naanị na-arụsi ọrụ ike ma ị ga-emechaa…
Otú ọ dị, ihe agbara nwere ike ịdị iche n'etiti Ndị na-emepụta ọdịnaya Youtube. Ọ bụ ezie na ụfọdụ YouTubers na-akọ na ị nweta Community Tab naanị ụbọchị ole na ole mgbe ha lụsịrị ndị debanyere aha 1,000, ụfọdụ ga-echere ịnweta karịa ndị debanyere aha 3,500 iji nweta ya.
Yee ya, ọ bụrụ na ị gafere ndị debanyere aha 1000 dị mkpa ma ka nweghị akara nke Youtube Community Tab, atụla ụjọ. Ọ ga-ewe ebe ọ bụla site na ụbọchị ole na ole ruo ụbọchị 30. Ma ị ga-enweta ya n’ikpeazụ.
Ihe 3 Dị Mfe I Nwere Ike Ime Inweta YouTube Community Tab Ngwa
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịme ngwangwa usoro ahụ ma nweta Youtube obodo taabụ ọsọ ọsọ, lee ihe ole na ole ị nwere ike ime.
Soro Ndị Na-ege Gị Ntị Tinyekwuo Aka
mkparịta ụka bụ otu n’ime ihe ngosi kachasị mkpa nyocha YouTube mgbe a bịara n’inweta ohere ịbanye na Tab Community.
Dịka eziokwu, YouTubers nwetara ohere ngwa ngwa na akụkọ atụmatụ a nwere njikọ dị elu na ndị na-ege ha ntị.
Ka ị na-echekwu banyere ya, otú ahụ ka ọ na-abụ ihe ezi uche dị na ya!
Kedu onye nwere ohere iji Tab Community mee ihe n'ụzọ zuru oke: Ndị okike ndị na-eso ndị na-edebanye aha ya na-emekọrịta ihe mgbe niile, ma ọ bụ ndị na-adịghị arụ ọrụ, ndị nkịtị.
Soro ndị na-ege gị ntị soro ndị ọzọ na-eme ihe
Yabụ ọ bụrụgodi na YouTube egosighi ozi a, ị nwere ike maa egwuregwu ịgba egwu ofufe gị taa site na ịme ihe ndị a:
Zaghachi okwu ọ bụla. Azịza gị agaghị adị ogologo, nwee ọgụgụ isi, ma ọ bụ ihe ọ bụla pụrụ iche. Mana ịza ajụjụ ọ bụla ga - eme ka usoro ntinye aka gị (na karma) dị ukwuu! Naanị cheta, jiri okwu nke aka gị, azaghachila azịza edere ede tupu oge.
Jụọ ajụjụ. Naanị ihe ị ga-ekwu bụ "Ekele!" mgbe ị nwetara otito, mgbe ị ga - amalite mkparịta ụka gbasara otu isi ihe onye na - ele ya lebara anya na nkọwa ha?
Iji maa atụ, jụọ ha: “Gịnị masịrị gị na ya?”. Ọ bụrụ na ha ekwetaghị n’ihe i kwuru, jụọ ha, sị: “Olee ihe ị gaara eme ma ọ bụghị ya?” ma ọ bụ “Gịnị ka ị ga-atụ aro?”
"Obi" ihe kachasị mma. Mgbe ị masịrị okwu na-amasị gị (n'ihi na ọ gbakwunyere ọtụtụ uru na mkparịta ụka ma ọ bụ naanị n'ihi na ọ dị egwu), nwee obi ya. Ọ bụghị naanị onye na-ekiri ihe ga-enweta ọkwa, mana nke a bụ ihe mgbaàmà ọzọ na YouTube ga-echebara echiche.
Na mgbakwunye, onye ọ bụla nwere mmasị inweta obi sitere n'aka onye okike. Ọ na-eme ka ha nwee mmetụta nke ịbụ ndị e ji kpọrọ ihe, si otú a na-ewulite iguzosi ike n'ihe nye gị na ọwa gị.
Gwa Ndi mmadu ka ha kwuo uche ha
Ndị mmadụ na-ahụkarị echiche ha. Ma ha anaghị eme ya oge niile.
Ọ bụghị n'ihi na ndị mmadụ anaghị eche banyere vidiyo gị, ma ọ bụ na ị chọghị ịkọ echiche ha! Mgbe ụfọdụ, ha na-echefukarị gbasara ịza ajụjụ.
See hụrụ, enwere video na-atụ aro mgbe niile n'akụkụ aka nri nke YouTube na-arịọ ka a pịa ya. Ma obu ndi mmadu amaghi ihe ha ga ekwu.
Ya mere, ọ bụ ọrụ gị ichetara ha ka ha kwuo okwu. Know mara, na vidiyo gị. Ọ bụghị naanị ịzaghachi okwu dị ka aro gara aga.
Maka oge ụfọdụ, ihe niile ị ga - eme bụ ịrịọ ma weta ha na mkparịta ụka ahụ site na ịhapụ echiche.
Mma, ị chọrọ ịzọpụta oku ime ihe ruo na njedebe nke vidiyo gị. Nwere ike dobe ha n'etiti vidiyo, dị nnọọ ka ọ dị mgbe niile-ejikọ gị video si isiokwu.
Ka o sina dị, nyere ha aka inyere gị aka! Nwere ike ịjụ, na njedebe nke vidiyo:
Amaghị ihe ị ga-ajụ ndị na-ege gị ntị, lelee ụfọdụ anya n'okpuru:
Kedu ihe ha ga-eme n’isiokwu a
Kedu ihe bụ ego ha nwere ike ịkọrọ ndị obodo
Ihe ha choro ihu n’ihu
N'ozuzu, jụọ ma ị ga-enweta!
Etu esi emepụta ozi na Youtube Community Tab gị
Ọ bụrụ na ịnọnyere anyị ruo mgbe akụkụ a, nke ahụ pụtara na ị mejuola ihe niile achọrọ na obodo youtube chọrọ ma nwee ike ịbịakwute gị ndị debanyere aha na ihe ọzọ karịa vidiyo na nkọwa!
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-eduzi gị n'usoro niile iji mee ka obodo izizi izizi na Youtube.
Mepụta Youtube Community Post na Kọmputa
Nzọụkwụ 1: Gaa na YouTube wee banye na akaụntụ gị na Mac ma ọ bụ PC gị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Nzọụkwụ 2: Gaa na ntanetị YouTube gị.
Kwụpụ 3: Na menu taabụ, họta “ỌRM”.
Kwụpụ 4: Pịnye ma ọ bụ mado ozi gị n'ime igbe ederede wee tinye onyogho, GIF, ma ọ bụ vidiyo, ma ịchọrọ.
Nzọụkwụ 5: Họrọ ụdị post ịchọrọ ịmepụta - vidiyo, ntuli aka, onyonyo, ma ọ bụ post.
Nzọụkwụ 6: Họrọ “Biputere.”
Ga-enwe ike ihu akwụkwọ ozi Community gị n'okpuru taabụ "Community" nke ibe ọwa gị.
Mepụta post ọhaneze Youtube na ekwentị
Usoro nke ịmepụta post Community bụ otu ma ị nwere iPhone ma ọ bụ gam akporo:
Nzọụkwụ 1: Mepee ngwa YouTube na iPhone ma ọ bụ gam akporo gị.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ "Mepụta" - bọtịnụ ahụ yiri akara gbakwunyere na ala ihuenyo gị
Nzọụkwụ 3: Họrọ “Biputere.”
Nzọụkwụ 4: Tinye post gị na igbe ederede, ma bulite mgbasa ozi ọ bụla ịchọrọ itinye.
Nzọụkwụ 5: Họrọ ụdị post ịchọrọ ịgbanye.
Nzọụkwụ 6: Kpatụ "Biputere."
Wzọ 6 iji YouTube Community Tab iji bulie echiche
Gwa ndị debanyere aha gị vidiyo ọhụrụ
You bulite vidiyo ọhụrụ na ọwa YouTube gị?
Ọ bụ ezie na ndị a pịrị na bọtịnụ mgbịrịgba ahụ ga-enweta ọkwa ọhụụ ozugbo izipụrụ vidiyo ọhụrụ ga-ama, ndị ọzọ agaghị.
Fọdụ ndị debanyere aha nwere ike ghara ịlafu vidiyo gị mgbe ewepụtara ya. Ọ bụ ya mere iji mee ka ha mata site na iji post ọhaneze.
Site na ịkọ banyere vidiyo ọhụrụ gị na ntanetị obodo Youtube, ị ga-enwe ohere nke abụọ ịgba ndị na-ege gị ntị ume ka ha lelee ya.
Ihe ị ga - eme bụ ịga na taabụ obodo gị ma kwalite vidiyo ọhụrụ gị ebe ahụ site na ịkekọrịta njikọ ya. Buru n'uche na YouTube ga-enye ntakịrị nlele nke njikọ vidiyo agbakwunyere gị na thumbnail, aha, ọnụ ọgụgụ nke echiche na oge ebupụtara vidiyo gị.
Ọzọkwa, kwalite vidiyo gị kachasị ele anya na taabụ obodo gị.
Nye gị teaser vidiyo ọzọ
Tupu Community Tab, ọ dịghị ụzọ dị mfe iji mee ka ndị na-akwado gị nwee obi ụtọ banyere vidiyo na-abịanụ.
N'ezie, ọtụtụ ndị okike ga-ewulite atụmanya maka vidiyo ha na nyiwe ndị ọzọ, dịka Twitter na Facebook.
N'ihi Community Tab, ị nwere ike ịnye otu mkpali ahụ iji kpalite mmasị ndị debanyere aha gị tupu ị bipụta vidiyo gị ọzọ.
Cheta mgbe ị na-ele ihe nkiri ihe nkiri?
Enwere ike ime otu ihe na post ogbe YouTube ka ịnye ndị debanyere aha gị vidiyo nke na-abịa. Ọ bụghị naanị na ị ga - akpali mmasị ndị mmadụ, kamakwa ị ga - eme ka ha lelee ya anya.
Mepụta ntuli aka
Ntuli aka bu uzo di ike iji guzobe njikọ gi na ndi nlere gi.
Nwere ike ịmepụta ntuli aka ịjụ ndị na-ekiri ihe ọdịnaya ị kwesịrị ịmepụta, ha chọrọ ile, jụọ ha vidiyo kachasị amasị ha, wdg.
Ka a sịkwa ihe mere ntuli aka bụ otu n'ime ụdị mgbasa ozi kachasị ewu ewu. Na ezi ihe kpatara ya: ntuli aka bụ ụzọ dị mfe iji mee ka ndị na-akwado gị sonye na ọwa gị.
Na mkpokọta, site na ikwe ka ndị na-ekiri gị tinyekwuo aka na ọwa gị, ị gaghị enweta naanị data bara uru gbasara mmasị ha, kamakwa ị ga-enwe ike ịbawanye ọkwa njikọ nke ọdịnaya gị.
Na-akwalite ngwaahịa gị
Buru n'uche na ị nwere ike iji YouTube Community taabụ kwalite ngwaahịa gị na ndị debanyere aha gị ma ọ bụ naanị ndị ọbịa.
N'okwu a, naanị dee mmelite ọkwa na taabụ Community gị yana foto nke ngwaahịa gị yana njikọta peeji ahịa ngwaahịa a. Tụlee ịnye mbelata ego pụrụ iche maka naanị gị Ndị debanyere aha YouTube ma nke ahụ kwesiri ịgba ha ume ka ha lelee webpage gị.
Nabata nnọkọ Q&A
Zọ ọzọ ị nwere ike iji tinye taabụ nke Community gị bụ ịmekọrịta ndị debanyere aha gị site na ịnabata nnọkọ Q&A.
Iji bulie oke elu, kwalite Q&A na mbubata na taabụ obodo gị site n'ịkpọ ndị na-ekiri gị ka ha dee ajụjụ na nkọwa.
Mgbe oge ụfọdụ gasị, laghachi ma malite ịza ajụjụ ndị na-ekiri gị. Echegbula, ikwesighi ịza ajụjụ niile edepụtara na azịza. Naanị họrọ ndị kachasị mma.
Ọdịnaya pụrụ iche
Dị ka ikpo okwu ọ bụla, ọ dị mkpa inye ndị mmadụ ihe mere ha ga-eji na-agbaso mmelite gị na Tab Community gị. Y’oburu n’itinyeghari ọdịnaya gi na Instagram ma obu Twitter, ndi mmadu agaghi enwe ihe ha g’eji lelee ihe ndi n’eme na Tab Tab gi.
Mee ike gị niile iji nye naanị ọdịnaya nke ndị fans gị enweghị ike ịchọta ebe ọ bụla. Nwere ike ịnye ha foto eserese ma ọ bụ ihe ọchị, ọkwa adịghị mma. Know mara, mee onwe gị ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị.
Ọ bụ ezie na Youtube Community Tab yiri ka ọ bụ nnwale ọzọ ịchụkwudo na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị maara etu esi eji ikike nke atụmatụ a, ọwa gị nwere ike ito ngwa ngwa karịa ịde vidio.
N'ikwu ya, ebe ọ bụ na ịchọrọ ịnweta ndị debanyere aha 1000 iji nwee obi ụtọ na nke a, ị chọrọ enyemaka niile ị ga-enweta iji ruo akara ahụ.
N'ezie, gịnị kpatara na ị naghị agba mbọ itinye ego na Youtube? Site na ọrụ nke AudienceGain, ị ga - enweta ndị debanyere aha 1000 na Oge elekere 4000 n'oge kachasị dị mkpirikpi o kwere omume.
Anyị na-ekwe nkwa na ndị ọ bụla debanyere aha na oge nlele ị nwetara n'aka anyị bụ ihe dị adị na nke ezigbo, na-enweghị atụ egwu Youtube na ndị dị otú ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, daalụ maka ịgụ ọkwa anyị. Lee gị oge ọzọ!